राहुल गान्धीले कांग्रेस अध्यक्षबाट राजीनामा दिने, के यो गान्धी परिवारको राजनीतिक अन्त्य हो ?
नयादिल्ली, ११ जेठ । हारपछि भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । राहुल गान्धीले लोकसभामा पराजयपछि बसेको कांग्रेस कार्यसमिति बैठकमा शनिबार राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । लोकसभा निर्वाचनमा पार्टीको प्रदर्शनको समीक्षा गर्नका लागि कांग्रेस कार्यसमिति बैठक बोलाएको थियो । बैठकको सुरुमा नै राहुल गान्धीले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर, कांग्रेस कार्यसमिति बैठकका सदस्यहरूले भने राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्..
एजेन्सी, ११ जेठ राहुल गान्धीले भरमग्दुर प्रयास गरे। तर, ‘एक्जिट पोल’का अनुसार उनी तत्काल आर्थिक र सामाजिक सुधारको खाँचो रहेको देशमा ‘म मोदीको विकल्प हुँ’ भनेर भारतीय मतदातालाई विश्वस्त तुल्याउन असफल भए। अन्ततः भारतको छ साता लामो सात चरणको आम चुनाव सकिएको छ। आइतबार सार्वजनिक भएको ‘एक्जिट पोल’अनुसार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले संसद्मा बहुमत कायम गर्नेछ। मे २३ का दिन अन्तिम..
नयाँ दिल्ली, १० जेठ भारतको निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको औपचारिक नतिजा अनुसार सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पहिला भन्दा बढी सिटमा जित हासिल गरेको छ । सन् २०१४ मा भन्दा २२ सिट बढीमा विजयी हुदै भाजपा एक्लैले ३०३ सिट ल्याएको निर्वाचन आयोगले शुक्रबार घोषणा गरेको छ । भाजपा नेतृत्वको संयुक्त गठबन्धन (एनडीए)ले भने ३५२ सिट हाँसिल गरेको आयोगका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।..
चुनाव जितेपछि नेपाली नेतालाई मोदीले फर्काए जवाफ, भाजपा बलियो सरकार !
काठमाडौँ, १० जेठ । भारतमा चुनाव जितेपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई दिइएको बधाईको लागि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेपाली नेताहरुलाई जवाफ फर्काएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फर्काएको जवाफमा धन्यवाद दिँदै नेपाल र भारत लामो समयदेखि निकटका साथी र छिमेकी भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले जनस्तरमा पनि प्रगाढ सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै दुई देशको सम्बन्ध अझ उचाईमा पुर्याउनका..
लोकसभा निर्वाचनः कँग्रेसले १ सय सिट पनि जित्न सकेन, भाजपालाई भने अत्याधिक बहुमत
काठमाडौं, १० जेठ भारतीय लोकसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब १९ सिटको नतिजा आउन बाँकी रहँदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भारी बहुमत ल्याएको छ । सो पार्टीले ३४५ सिटमा जित हासिल गर्नुका साथै थप ८ स्थानमा अग्रता कायमै बनाएको छ । यस्तै काँग्रेसले ९६ स्थानमा मात्रै जित हासिल गरेको छ । उसको कुनै स्थानमा अग्रता देखिँदैन । यसैगरी समाजवादी पार्टी..
काठमाडौँ, ९ जेठ । भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले चुनावी हार स्वीकार गरेका छन् र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिएका छन् । भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले बिजेपी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिएका हुन् । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले ९५ सिटमा मात्र अग्रता लिएपछि बिहीबार साँझ दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा गान्धीले मोदी र भाजपालाई धेरै धेरै बधाई दिएका हुन् । ‘यो विचारधाराको..
भाजपाले भारी बहुमतका साथ जित्‍ने संकेत, वायनाडमा भने राहुल गान्धी विजयी
एजेन्सी, ९ जेठ भारतको १७ औं लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी केरलास्थित वायनाडमा विजयी भएका छन् । उनले निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी सीपीआईका उमेदवार पीपी सुनेरलाई पराजित गरेका हुन् । यसपटकको पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भाजपा भारी बहुमतका साथ जित्‍ने संकेत देखिन्छ । अहिलेसम्म २९४ स्थानमा भाजपा अघि छ भने ५५ स्थानमा कांग्रेस अघि छ । त्यसैगरी वाइएसआर काँग्रेसले २५..
भारतीय लोकसभा निर्वाचनको मतगणना : भाजपाको सुनामी, के दोहोरिएलान् मोदी ?
काठमाडौं, ९ जेठ । भारतीय लोकसभा चुनावको प्रारम्भिक मतगणनामा सत्तारुढ गठबन्धनले अग्रता लिएको छ । गणनाको फरक फरक आँकडा सार्वजनिक भए पनि सबैले सत्तारुढ बीजेपी नै अगाडि देखिएका छन् । मतगणनाको पछिल्लो परिणाममा ३ सय ४४ स्थानमा अग्रता लिएको छ । कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन यूपीए एनडीएभन्दा निकै पछि देखिएकाे छ । आजतका अनुसार यूपीएले अहिलेसम्म मात्रै ९० स्थानमा अग्रता लिएको छ । अन्य दलले..
Election Results 2019 - अमेठीमा अघि लागे राहुल गान्धी
काठमाडौँ, ९ जेठ भारतमा ३९ दिन लगाएर सात चरणमा सम्पन्न भएको लोकसभा चुनावको मतगणना जारी छ । भारतमा भएको १७ औँ लोकसभा चुनावको मतगणना जारी छ । सुरुवाति रुझानमा भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले आक्रामक अग्रता लिएको छ । केही महत्वपूर्ण सिटमा जारी मतगणना रोमाञ्चक देखिएको छ । अमेठीको सुरुवाति मतगणनामा पछि परेका कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले अहिले अग्रता लिएका छन् । भाजपा उम्मेदवार तथा केन्द्रीय मन्त्री..
मोदी वा राहुल ? भारतमा ब्यालेटको मतगणना सुरु, १६.५ लाख डाँक मतपत्र, बिजेपी अघि, कँग्रेसको टक्कर
नयाँदिल्ली, ९ जेष्ठ । भारतमा कुल ५ सय ४२ सिटका लागि बिभिन्न चरणमा गरी सम्पन्न भएको लोकसभा निर्वाचनको मतगणना आरम्भ भएको छ । विहिबार विहान देखि १६ दशमलव ५ लाख डाक पत्रको मतगणना सुरु गरिएको हो । जम्मा ९९ करोड मतदाता रहेको भारतमा यसपटक कुल गरेर ६७ दशमलव ११ प्रतिशत भोटिंग भएको थियो । प्रारम्भमा सत्तारुढ बिजेपी नै अघि विहानदेखि सुरु भएको मतगणनामा..
मोदीको 'भाजपा' सरकारबाट बाहिरिने निश्चित रहेको समाजवादी अध्यक्षको दाबी
काठमाडौँ, ८ जेठ एकजना चर्चित भारतीय राजनीतिज्ञ तथा पुर्वमुख्यमन्त्रिले मोदीको भारतीय जनता पार्टी सरकारबाट बाहिरने निश्चित रहेको ठोकुवा गरेका छन् । संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उत्तर प्रदेशका पुर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले मोदीको भाजपा उत्तर प्रदेशको राजनीतिबाटै बिलाएर जाने दाबी गरेका हुन् । मोदीको पार्टीलाई टक्कर ! अखिलेश यादवले उत्तर प्रदेशमा मायावती नैना कुमारी नेतृत्वको बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सँग गठबन्धन गरेका थिए । यो अर्थमा भारतमा..
मतगणनाको परिणाम मात्र विश्वास गरिने भन्दै विपक्षीले खारेज गरे एक्जिट पोल
नयाँदिल्ली, ६ जेठ । भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीका वरिष्ट नेता शशी थरुरले चुनावी मतसर्वेक्षणका प्रक्षेपणहरु गलत रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ । उहाँले आगामी बिहीबार सार्वजनिक हुने मतगणनालाई मात्र विश्वास गर्न सकिने बताउनुभयो । “चुनावी मतसर्वेक्षण सबै गलत रहेको मेरो बुझाई छ । गतसाता अस्ट्रेलियामा सम्पन्न ५६ विभिन्न मतसर्वेक्षण सबै गलत साबित भएका थिए । भारतमा पनि धेरै मानिसले सर्वेक्षकलाई सबै..
नयाँ दिल्ली, ५ जेष्ठ । भारतमा सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान आइतबार सम्पन्न भएको छ । आइतबारको अन्तिम निर्वाचन अन्र्तगत ५९ सिटका लागि ८ राज्यका ९ सय १८ उम्मेदवार प्रतिश्पर्धामा थिए । यसैबीच विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानिएको निर्वाचन सकिएसँगै त्यसको अन्तिम नजिताबारे बिभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको । श्रोत : भारतीय मिडियाहरु लोकसभाको कुल ५ सय ४२ सिटको विषयलाई लिएर भारतमा बिभिन्न एग्जिट पोल आउन..
भारतीय लोकसभा निर्वाचनको पूर्ण नतिजा कहिले आउँछ ?
एजेन्सी, ५ जेठ भारतको लोकसभा निर्वाचनमा आज सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान भइरहेको छ । अप्रिल ११ मा सुरु भएको मतदान विभिन्न क्षेत्रमा सात चरणमा भएको हो । करिब ९० करोड मतदाताको योग्यता पुगेको यो निर्वाचनमा सरदर ६० प्रतिशत मतदान भएको छ । ५४३ सिटका लागि करिब आठ हजार उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । यो चुनाव मुख्य रुपमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र..
भारतमा सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान जारी, ५९ सिटका लागि ८ राज्यका ९१८ उम्मेदवार
नयाँ दिल्ली, ५ बैशाख । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन मानिने भारतमा आज अर्थात आइतबार अन्तिम चरणको निर्वाचन भैरहेको छ । सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान मार्फत ५९ सिटका लागि ८ राज्यका ९ सय १८ उम्मेदवार प्रतिश्पर्धामा छन् । यस चरणमा बिहारको ८ झारखंडको ३, मध्यप्रदेश को ८, उत्तरप्रदेश को १३ , पश्चिम बंगालको ९ , हिमाचल प्रदेश को ४, पंजाब को १३..
भारतीय राज्य हिमाचलमा भेटियो २५ करोड वर्ष पुरानो रुखको अवशेष
शिमला, ३ जेठ भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेशको खडापत्थर क्षेत्रमा २५ करोड वर्ष पुरानो रुखको अवशेष भेटिएको छ। अवशेष डाइनोसरको युगको भएको दाबी गरिएको छ। हिमाचल राज्य संग्रहालयका क्युरेटर डा.हरि चौहानले रुखको अवशेष भेटिएको पुष्टि गरेका छन्। डा.चौहानका अनुसार अवशेषलाई संरक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अवशेष फेला परेको क्षेत्रलाई छिटै नै भारतीय पुरातत्व विभागको जिम्मा दिइने भएको छ। उनले करिब एक सातामा विभागको..
श्रीलङ्कामा जातिय हिंसा : आम नागरिक त्रसित, ७८ जना गिरफ्तार
एजेन्सी, २ जेठ श्रीलङ्काको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा भएका विभिन्न हिंसात्मक घटनाका क्रममा ७८ जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसपी रुवान गुनासेकराले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार कुरुनेगाल, कुलियापिटीया, निकावेरातीया, चिलावलगायतका ठाउँबाट उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको हो । उनले पक्राउ परेकाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । प्रहरीले झडप वा हिंसाका बेलाको भिडियोहरू पनि हेरेर छानबिन गरिरहेको उनले बताए । प्रहरीले पक्राउ परेका सबै जना दोषी भएको..
भारतमा छैटौंं चरणको चुनाव : दिल्लीको रस्साकस्सीमा भाजपालाई फाइदा !
नयाँदिल्ली, २९ वैशाख । भारतको तल्लो सदन लोकसभाका लागि जारी १७ औं चुनावअन्तर्गत आइतबार छैटौं चरणको मतदान हुँदै छ । यो चरणबाट विभिन्न सात राज्यका ५९ लोकसभा सदस्यको भाग्यको फैसला हुनेछ । तीमध्ये दिल्लीका सातवटा लोकसभा क्षेत्रमा पनि आइतबार नै मतदान हुँदै छ । भारतको राजधानीसमेत भएकाले यहाँको सरगर्मी र नतिजामाथि सबैको चासो छ । १ करोड ४३ लाख मतदाता रहेको दिल्लीका..
भारत निर्वाचन : उखुको 'गुलियो'ले बदल्न सक्ला 'चुनाव'को स्वाद ?
शुक्रबार, बैशाख २७, २०७६ साल
नयाँदिल्ली, २७ वैशाख । हालसालै जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशमा एक चुनावी सभा गरिरहेका थिए तब उनी उखु किसानसमक्ष एउटा बाचा गर्न बाध्य भए । यी किसानहरू त्यो राज्यका हुन् जहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ । उखु किसानहरू चिनी उद्योगले पैसा नदिएर एकदमै आक्रोशित छन् । उनीहरूले त्यही कारण विरोध प्रदर्शन गरे र रेल सञ्चालन नै ठप्प पारे। नरेन्द्र मोदीले सभामा भने, "मलाई थाहा..
भारतमा पाँचौं चरणको चुनाव आज : सोनिया, राहुल गान्धी, राजनाथ सिंह लगायत नेता मैदानमा
नयाँदिल्ली, २३ बैशाख । भारतको तल्लो सदन लोकसभाका लागि सोमबार पाँचौं चरणको मतदान शुरु भएको छ । यस चुनावमा सात राज्यका ५१ स्थानका लागि मतदान हुँदैछ । पाँचौं चरणको यस चुनावमा उत्तर प्रदेशका १४, राजस्थानका १२, पश्चिम बंगाल र मध्यप्रदेशमा सात–सात, बिहारमा पाँच र झारखण्डमा चार स्थानमा मतदान हुँदैछ। जम्मु काश्मिरको लद्दाख तथा अनन्तनागका लागि पुलवामा र शोपियाँ जिल्लामा पनि मतदान हुने..
नयाँदिल्ली, २२ वैशाख । भारत र बङ्गलादेशको तटीय इलाकामा फानी नाम दिइएको आँधीका कारण आइतबारसम्म ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । आँधीका कारण भारतको उडिसा राज्यमा २९ जना र बंगलादेशमा १३ जनाको मृत्यु भएको दुबै देशका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । भारतको उडिसाबाट शुक्रबार शुरु भएको यस आँधी प्रतिघण्टा २०० किलोमिटरसम्मको बेगमा चलेको थियो । तर बंगलादेशतर्फ पुग्दा नपुग्दा आँधीको बेग केही मत्थर..
अरबिन्द केजरीवाललाई थप्पड हान्ने व्यक्ति को हुन् ?
एजेन्सी, २२ वैशाख भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाललाई शनिबार एक कार्यक्रममा थप्पड हानिएको छ। आम आद्मी पार्टीको मोतीनगर रोड सोमा सहभागी केजरीवाललाई भीडबाट आएका एक जनाले जीपमा चढेर थप्पड हानेका थिए। थप्पड हान्ने ३३ वर्षीय सुरेशलाई दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तर उनी को हुन् र किन केजरीवाललाई थप्पड हाने भन्ने विवाद देखिएको छ। प्रहरीले सुरेश केजरीवालकै पार्टी आपका सदस्य रहेको तर पछिल्लो..
सामुद्रिक आँधी फानीका कारण उडिसामा ९ को मृत्यु, १ सय ६० घाइते
भुवनेश्वर, २१ वैशाख । शक्तिशाली सामूद्रिम आँधी ‘फानी’ का कारण भारतको पूर्वी तटवर्ती राज्य उडिसामा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रतिघण्टा २०० किलोमिटरको गतिमा शुक्रबार आएको आँधी र बर्षामा परी अरु १६० जना घाइते भएका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । आँधी र बर्षाले रुख र विजुलीका पोलहरु ढलाएको छ भने थुप्रै भौतिक संरचनाहरुमा पनि क्षति पुर्याएको समाचारमा जनाइएको छ । विषेशगरेर भुवनेश्वर, कत्ताक,..
भारतको महाराष्ट्रमा बम विस्फोट, १५ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
एजेन्सी, १८ वैशाख भारतको महाराष्ट्र राज्यको गढचिरौली जिल्लामा नक्सलवादीहरुले गरेको आक्रमणमा परि १५ जना प्रहरीको ज्यान गएको छ । बुधबार गस्तीमा गैरहेको प्रहरीको गाडीलाई लक्षित गरी नक्सलवादीको एक समूहले आईडी बम विस्फोट गराएको हो । गाडीमा १६ जना प्रहरी सवार रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा नक्सलवादी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त जारी रहेको छ । केही समयअघि मात्रै महाराष्ट्रका विभिन्न..
२ सय वर्षको इतिहासमा दुर्लभ दृष्य, जापानी राजाद्वारा गद्दीत्याग
टोक्यो, १७ बैशाख जापानी राजा आकिहितोले मङ्गलबार जापानको राजगद्दी त्याग गर्न लाग्नु भएको छ । ८५ वर्षीय आकिहितोले केही वर्ष अगाडीदेखि नै आफ्नो स्वास्थ्यको कारण राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भएको जनाउनु भएपछि उहाँले गद्दी त्याग्ने वैधानिक अनुमति पाउनु भएको थियो । आकिहितोले राजगद्दी त्याग्नु भएको भोलिपल्ट नै युवराज नारुहितोले जापानी राजसिंहासन सम्हाल्नु हुनेछ । अर्थात मे १ बाट युवराज नारुहितोले जापानी राजसिंहासन सम्हाल्नु..
५० प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँ युवामा टाढा नदेख्ने समस्या
बेइजिङ, १७ वैशाख चीनका आधाभन्दा बढी बालबालिका र किशोर किशोरीहरुमा नजिक देख्ने तर टाढा नदेख्ने समस्या रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार सन् २०१८ मा यस्तो समस्या भएका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरुको संख्या ५३।६ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला केही बर्षमा बाल्यावस्था तथा किशोरावस्थामै आखाँको समस्या देखिने क्रम बढेको आयोगका एक जना उच्च अधिकारी झाङ योङले पत्रकारहरुलाई..
भारतमा चौथो चरणको मतदान - कलाकारदेखि धनाढ्य अम्बानीसम्मको उपस्थिति
नयाँदिल्ली, १६ बैशाख भारतको तल्लो सदन लोकसभाका लागि चौथो चरणको मतदान सोमबार शुरु भएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार ९ वटा राज्यका ७१ स्थानका लागि सोमबार मतदानको लागि त्यहाँ बिदा दिइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, चौथो चरणको निर्वाचनमा १२ करोड ७९ लाख मतदाता रहेका र उनीहरुले ९४५ जना उम्मेदवारको भाग्यको फैसलाको लागि चर्चित बलिउड कलाकारहरुले मतदान गरेका छन् । भारतका धनाढ्य व्यक्तित्वहरु..
भारतमा चौथो चरणको मतदान, ७१ स्थानका लागि चुनाव
नयाँदिल्ली, १६ बैशाख । भारतको तल्लो सदन लोकसभाका लागि चौथो चरणको मतदान शुरु भएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार ९ वटा राज्यका ७१ स्थानका लागि सोमबार मतदान भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, चौथो चरणको निर्वाचनमा १२ करोड ७९ लाख मतदाता रहेका र उनीहरुले ९४५ जना उम्मेदवारको भाग्यको फैसला गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आमजनतालाई ट्वीटर मार्फत मतदानमा सक्रिय सहभागी हुन आह्वान..
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्पत्तिको मामिलामा करोडपति !
एजेन्सी, १६ वैशाख भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्पत्तिको मामिलामा करोडपति छन् । यद्यपि १५ वर्ष गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका र पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएका उनको चल अचल सम्पत्ति केवल २ करोड भारु अर्थात ३ करोड २० हजार नेपाली रुपैयाँ मात्रै छ । वाराणसीमा नामांकन दर्ता गराएपछिको शपथ पत्रमा गत वर्ष उनको सम्पत्तिमा केवल २२ लाख ८५ हजार ६ सय २१ अर्थात ३५ लाख..
Results 349: You are at page5of 12